Rafitra famaliana mpijery
Ny QRF300C dia rafitra valinteny ho an'ny mpanatrika tsotra sy mahomby amin'ny fametrahana ny efitrano fianarana, ny fivorian'ny vondrona na na aiza na aiza no angatahana valiny eo noho eo. Mitantana sy mijery an-tsary ny angon-drakitra voaangona amin'ny alàlan'ny fanafarana sy fanondranana rakitra Excel ary famadihana vaovao ho solosaina Powerpoint miaraka amin'ny bokotra.
Misy laharana ID isaky ny mpianatra lavitra, izay afaka averina apetraky ny mpampianatra amin'ny fotoana rehetra. Ny valiny rehetra dia nangonina ho azy ao anatin'ny segondra. Mitondrà fanamorana sy fomba amin'ny fampisehoana ataonao amin'ny alàlan'ity Remote Wireless Wireless All-in-One ity.
Ampiasain'ny mpampianatra hifehezana ny fizotran'ireo hetsika ao an-dakilasy.
Rindrambaiko ARS tsara indrindra -RindrambaikoClick (Tafaraka amin'ny PPT)
Mampiasa fampisehoana PowerPoint? Andramo ny rindrambaiko fampidirana PowerPoint Qclick, izay ahafahanao mandoto ny mpihaino anao sy hahita ny valiny AOKO ny fampisehoana ataonao. Ny valintenin'ny mpijery eo noho eo sy ny fahitana avy eo amin'ny rantsantananao. Misaotra ireo mpanjifanay, izahay dia nanjary ilay rafitra mpamaritra ny valiny tsy miankina (ARS) avo lenta avo indrindra amin'ny tsena!
Andao miaraka amin'ny rindrambaiko Qclick interactive Free, izay suite dia manisy modely hananganana kilasy, hamoronana fanadinana, modely famolavolana, hitantanana ny fifandraisana ary hamokarana tatitra. Manohana ireo endri-tsoratry ny powerpoint rehetra misy ny fanaingoana manokana, feo sns.
Mpandray RF tsy misy tariby
Mora mifandray amin'ny solosainao amin'ny alàlan'ny USB. Miaraka amin'ny habetsaky ny ankihibe, mora entina ny mpandray. Teknolojia: radio 2.4GHz Frequency serasera roa miaraka amin'ny fisorohana ny fanelingelenana mandeha ho azy.
Tohano hatramin'ny olona 500 ao anatin'ny indray mandeha
QRF300C rafitra valinteny ho an'ny mpijery
Hahazo poketra maimaimpoana ianao amin'ny filaharan'ny famokarana betsaka.
Ity poketra ity dia manamora ny fitondrana ny rafitry ny valiny na aiza na aiza tianao hanaovana ny fampisehoana nataonao.
Fonosana mahazatra: set 1 / baoritra
Ny haben'ny fonosana: 450 * 350 * 230mm
Lanja mavesatra: 4.3kgs
Teo aloha: QRF888 Rafitra valin'ny valiny
Rafitra valiny an-dakilasy
Clicker an'ny mpianatra
Rafitra famaliana mpianatra
Data data QRF300C
QRF300C-valinteny ho an'ny mpijery antsipiriany haingana
Boky Torolàlana ho an'ny mpampiasa QClick V7.4
QRF300C Qclick Audien valiny ny rafi-pifandraisana
Brochure momba ny valiny QRF300C QClick